एउटा अनुदार अनुभूति | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 03/26/2011 - 11:24
काठमाडौ, चैत्र ११ -
म सडकमा थिएँ । बिहानको समय थियो । मानिसहरू आ-आफ्ना धन्दाहरूमा अल्झिरहेका थिए । धेरैलाई थाहा थिएन, एउटा विशाल व्यक्तित्व हाम्रै छेउबाट बिदा भएको थियो । मलाई पनि थाहा थिएन । चाबेल चोकमा भेटिएका साथीहरूसँग म सानोतिनो गफमा अल्झिरहेको थिएँ । आठ बज्न लागेको थियो । अकस्मात् ध्रुवचन्द्र गौतम मछेउ आइपुग्नुभयो । उहाँको अनुहार सधैँजस्तो उज्यालो थिएन । अलि अँध्यारो अनुहार लगाएर मतिर हेर्दै ध्रुवदाइले भन्नुभयो ः 'गोविन्जी जाने होइन ?'
उहाँको अनुहारमा टाँसिएको अँध्यारोको पातलो पत्रलाई एउटा रहस्यजस्तो देखेर मैले जिज्ञासापूर्वक सोधेँ ः 'कता ध्रुवदाइ ?'
'तपाईंलाई थाहा छैन ? बीपी बित्नु भएछ । श्रद्धाञ्जलीको लागि मानिसहरू गइरहेका छन्, जाऊँ ।'
बीपी निवासको छेउबाट मैले धेरैपटक ओहोरदोहोर गरिसकेको छु । खासमा त्यो घर तारिणीप्रसाद कोइरालाको घर हो, बीपी त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो । उहाँ बसेको त्यो घरको बाहिरपट्टि सधैँ नै गुप्तचरहरू बसिरहेका हुन्थे । बीपीको निवासमा आउने-जाने मानिसहरूको चियो गर्नु उनीहरूको धन्दा थियो । जागिरले सडकमा अलपत्र पारिदिएको उनीहरूको अनुहारलाई हामी देख्थ्यौं र अघि बढ्थ्यौं । कहिलेकाहीँ शिवध्वज बस्नेत त्यतातिर गइरहेको वा त्यताबाट आइरहेको हामी देख्थ्यौं र अघि बढ्थ्यौं । शिवध्वज बस्नेत नेपाली काङ्ग्रेसका समर्पित कार्यकर्ता थिए । उनलाई सम्भवतः बीपीको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । कहिलेकाहीँ साँझ वा बिहानको बेला शिवध्वज बस्नेत र अन्य सहयोगीसहित बीपी जयबागेश्वरीदेखि चाबेलसम्मको सडकमा हिँडिरहेको देखिनुहुन्थ्यो । म बीपीको भव्य व्यक्तित्वलाई देख्थेँ र नरेन्द्रदाइलाई सम्झन थाल्थेँ । उहाँको उपन्यासको नायक नरेन्द्रदाइ पनि भव्य व्यक्तित्वका पात्र थिए । बीपीले आफ्नो उपन्यास 'नरेन्द्रदाइ'मा आफ्नै व्यक्तित्व आरोपित गर्नुभएको हो कि जस्तो पनि लागिरहन्थ्यो ।
साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको त्यतिन्जेल प्रकाशित सबैजसो पुस्तकहरू मैले पढिसकेको थिएँ । 'हिटलर र यहुदी' पढिसक्न बाँकी थियो । ध्रुवदाइले बीपीको निधन भएको सूचना दिएर चाबेल चोकबाट जयबागेश्वरीतिर हिँडाइरहँदा मलाई बीपीभन्दा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले स्पर्श गरिरहेका थिए । त्यही स्पर्शको न्यानो प्रभावबाट मेरा गोडाहरू जयबागेश्वरीतिर गइरहेका थिए । अन्यथा...
ध्रुवदाइको वाणी हराएको छ । उहाँ चुपचाप हिँडिरहनुभएको छ । हामी हिँडिरहेको फुटपाथतिर अरू केही मानिसहरू पनि हतारहतार जयबागेश्वरीतिरै हिँडिरहेका छन् । ती मानिसहरूमा म नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाताहरूको आधिक्य देखिरहेको छु । साहित्यकारहरू देखिएनन् । त्यसैले मलाई एक किसिमको अप्ठेरो लागिरहेको थियो । 'तीन घुम्ती', 'सुम्निमा', 'नरेन्द्रदाइ', 'दोषी चश्मा' र 'श्वेत भैरवी'जस्ता कृतिहरूका स्रष्टाले संसारबाट बिदा लिएको थियो । त्यही स्रष्टाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न म ध्रुवदाइसँग हिँडिरहेको थिएँ । अन्यथा मलाई त्यहाँसम्म पुग्न निकै गाह्रो हुने थियो ।
'लाइन बस्ने होइन ?' ध्रुवदाइले सोध्नुभयो । उहाँ लाइनमा उभिइसक्नुभएको थियो । तर मलाई भने मेरो ठेउके उमेरले भित्रभित्रै तर्साइरहेको थियो । तैपनि बीपी होइन, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कृतिहरूतिर ध्यान दिँदै म ध्रुवदाइको पछिल्तिर लाइनमा उभिएँ ।
तेत्तीस सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर भारत प्रवासबाट नेपाल भित्रिएका बीपी कोइराला वामपन्थीहरूको दृष्टिमा गतिलो नेता थिएनन् । वामपन्थीवृत्तमा उनलाई भारतीय विस्तारवादको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा बुझिन्थ्यो । 'राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ' भनेपछि त वामपन्थीहरूले बीपी कोइरालालाई दरबारपरस्त, सम्झौतावादी, आदि विशेषण लगाइदिन थालेका थिए । तिनै वामपन्थीका थुप्रै दलहरूमध्ये बढी क्रान्तिकारी मानिने नेकपा माले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जासहित भूमिगत राजनीतिमा विस्तारित भइरहेको थियो । म त्यही मालेको राजनीतिक शिक्षाबाट अघि बढेको थिएँ । चीनमा डेङस्याओ पिङको वर्चस्व स्थापित भएपछि भने म मालेभन्दा बढ्ता क्रान्तिकारी देखिने नेकपा चौथो महाधिवेशनको नजिक पुगेको थिएँ । ठीक यही बेला बीपीको निधन भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र १२ ०८:१५